သြဂုတ်လ 2017 | 20 ၏စာမျက်နှာ 73 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 20)
Light က Technician အ
Light က Technician အကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာရှိရာအကြီးအ 08 / 22 / 17 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘ, တော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါဆွေးနွေးကြစေရန် အားလပ်ရက်အကြီးန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! တစ်ဦးအလင်း Technician အအမျှ, သင်, နေရာချလုပ်ကိုင်ရန်နှင့်အလင်းရောင်အပေါငျးတို့သရှုထောင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်, ပြပွဲထိန်းချုပ်မှုပါလိမ့်မယ် ...
ITV အထူးကုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာ 08 / 22 / 17 အပေါ် posted ဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမဘယ်မှာကြီးမြတ်တော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အားလပ်ရက်အကြီးန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်လှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောများ onboard ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေထုဖန်တီး ...
ထုတ်လွှင့် Technician အကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 08 / 22 / 17 အပေါ် posted အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ဘယ်မှာကြီးမြတ်တော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အားလပ်ရက်အကြီးန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်လှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောများ onboard ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေထုဖန်တီး ...
AV စနစ်အော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာ 08 / 22 / 17 အပေါ် posted ဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ဘယ်မှာကြီးမြတ်တော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အားလပ်ရက်အကြီးန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်လှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောများ onboard ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေထုဖန်တီး ...
လက်ထောက်အဆင့် Manager ကို
လက်ထောက်အဆင့် Manager ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 08 / 22 / 17 အပေါ် posted 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားတော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ဘယ်မှာ အကြီးအအားလပ်ရက်ကြီးမြတ်န်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! သင်္ဘော onboard တစ်ခုလုံးကိုဖျော်ဖြေရေးစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲအုပ်, ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သေချာ ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် & ITV အထူးကု
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် & ITV အထူးကုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 08 / 22 / 17 အပေါ် posted 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားတော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ ကြီးစွာသောအားလပ်ရက်ကြီးမြတ်န်ထမ်းတွေနဲ့စတင်ဘယ်မှာ! ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်လှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များက onboard ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေထုဖန်တီး ...
ထုတ်လွှင့်အော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - 08 / 22 / 17 အပေါ် posted Worldwide မှ Duration: Flexible လစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ဘယ်မှာကြီးမြတ်တော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အားလပ်ရက်အကြီးန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်လှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောများ onboard ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေထုဖန်တီး ...
Lounge ဟာ Technician အ
Lounge ဟာ Technician အကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာ 08 / 22 / 17 အပေါ် posted ဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမဘယ်မှာကြီးမြတ်တော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အားလပ်ရက်အကြီးန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်လှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောများ onboard ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေထုဖန်တီး ...
20 ၏စာမျက်နှာ 73«ပထမဦးစွာ...10«1819202122 » 304050...နောက်ဆုံး»